I-DeepJyoti Apartment-Kitchen [Eduze neIntl Airport] - I-Airbnb
I-DeepJyoti Apartment-Kitchen [Eduze neIntl Airport]
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBhawani
Iflethi ekuthiwa yi-DeepJyoti isembindini weKathmandu,kufutshane neTempile yasePashupati edweliswe kwiLifa leMveli leHlabathi. I-Flat Inokuhlala abantu abayi-4 ukuya kwabayi-6 ibe inganikwa ixesha elifutshane/elide . Iflethi okanye indlu ekwicomplex ikumgangatho osezantsi Kwindlu esihlala kuyo
i- ikufutshane kakhulu nesikhululo seenqwelo-moya esinokufikeleleka ngeeteksi ~ imizuzu eyi-10 okanye xa uhamba ngeenyawo i-2.2km/20min. Ukuhamba imizuzu eyi-2 ukuya kweyi-3 ukusuka ekhayeni lethu kuza kukusa kwisikhululo sebhasi okanye iteksi ukusuka kwindlela ephambili. Ungakhangela iGhimire Apartment ku-Google ukuze ubone indawo
Indawo yethu iphambi kweDwarika Hotel , iikhilomitha eziyi-2 ukusuka kwindlela ephambili kwaye ithule kwaye itofotofo kwindawo ehlala abantu. Indawo ephawulekayo ekufutshane yiHotele yaseDwarika, indawo yokuhlala eneenkwenkwezi ezintlanu xa uhamba ngeenyawo ukusuka endlwini yethu. Iivenkile zokutyela zasekuhlaleni ziyafumaneka kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (iBigMart, iCoffeeShops, iibhanki/ii-ATM kunye neevenkile zokutya). Amaxabiso akhethekileyo anikwa abaqeqeshwayo, amavolontiya kunye nootishala xa becelwa. Igadi encinci epholileyo iyafumaneka kwiindwendwe ezinechibi elincinci eline-lotus kuyo.
Singakunceda ekukhenkethiseni kwakho kwiindleko zokuthethathethana ngezinto onqwenela ukuzenza ngoxa uzenza zingalibaleki. Unganikwa amakhadi e-SIM kwisicelo sakho (iindleko zokuthwala wena). Ikhitshi elinefenitshala/indawo eqhelekileyo iyafumaneka ukuze ungasokoli ukuba unqwenela ukuyisebenzisa. I-microwave-oven inezixhobo ze-microwave-oven. ezikhoyo ukuze uzisebenzise. Ibhotile yamanzi isetyenziselwa ukusela amanzi ashushu. Izinto zokutya ezifana neekomityi, iiglasi, amacephe neefolokhwe ziyafumaneka. Ukucoca/ukuayinela iimpahla, uya kucelwa umnikelo we-fr kwiindleko zesepha n umbane. Kuza kubakho iiyure eziyi-24 emva kokutshaja i-fr. Nceda ube nengqiqo ngoxa usebenzisa ioveni nezinye izixhobo zombane. Ndibone kwiGoogle Maps! Iflethi okanye indlu ekwicomplex.. https://maps.app.goo.gl/tY5m9TP4cY914cvwagen
4.92 · Izimvo eziyi-85
Indawo yayo yokuhlala ekhuselekileyo nenezinto eziluhlaza. Ekuseni ipholile kakhulu kunye neentaka. Ngexesha losuku kuza kubakho ingxolo encinci ngenxa yokuhamba kwabantu, abantu abasebenzayo kwiindawo ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Bhawani
Siza kuzenza sifumaneke xa sinemibuzo ngokobuqu okanye efowunini. Singayithatha okanye siyise umntu omnye ngesithuthuthu kwaye sinokulungiselela abantu abaninzi ngeeteksi. Undwendwe oluhlala ixesha elide kuyo yonke iflethi eyi-15 usd ngosuku. Ukuthethathethana kunokwenziwa kuxhomekeka kwi-pax. Sinokukunika iphakheji ekhethekileyo yesibonelelo sasebusika.
Siza kuzenza sifumaneke xa sinemibuzo ngokobuqu okanye efowunini. Singayithatha okanye siyise umntu omnye ngesithuthuthu kwaye sinokulungiselela abantu abaninzi ngeeteksi. Undwendw…